विप्लव समूहका नेताहरुको घरदैलो : चुनावमा आउँछौं, चुनावमा आउँदैनौं ! « pennepal.com
विप्लव समूहका नेताहरुको घरदैलो : चुनावमा आउँछौं, चुनावमा आउँदैनौं !
Published On : 19 April, 2022 4:38 pm By :
६ वैशाख, काठमाडौं । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय रुपमा सहभागी नहुने, तर उपयोग गर्ने’ निर्णय गरेर राजधानी छिरेसँगै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु राजनीतिक भेटवार्ताको म्याराथनमा व्यस्त छन् ।
कपिलवस्तुमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विप्लवले चुनावमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए । तर महासचिवकै प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि दलीय रुपमा सहभागी नहुने, तर उपयोग गर्ने’ मध्यमार्गी निर्णय गरेर नेताहरु काठमाडौं आएका छन् ।
अहिले विप्लवसहितका नेताहरुले अरु दलका नेताहरुलाई भेटेर आफूहरु चुनावमा सहभागी हुन चाहेको सन्देश दिने गरेका छन् । अर्को पक्षका नेताहरुले भने ‘हामी त चुनाव बहिस्कारवाला हौं, चुनावमा आउँदैनौं’ भन्ने गरेका छन् ।
सरकारी अधिकारी र दलका नेताहरुलाई भेट्ने सुरुवात विप्लव र प्रकाण्ड पक्षका नेताहरुले गरेका थिए । चुनावमा सहभागी हुने भन्दै उनीहरुले दल दर्ता र पुनः मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सरकारका अधिकारीहरुले हुन्छ त भनेनन्, तर अस्वीकार पनि नगरेका कारण २४ चैतमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ निर्वाचन आयोग पुगे ।